>မောင်ရစ် – အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အထက်မြာ တပ်မတော် ဆိုတာ မရြိဘူး | MoeMaKa Burmese News & Media
အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အထက်မြာ
တပ်မတော် ဆိုတာ မရြိဘူး
မိတ်ဆေမြဵား ခင်ဗဵား –
ဒီအခဵိန်မြာ လောကုကီးတခုလုံးက ကဵဆုံးသြားတဲ့၊ အကဵဉ်းကဵနေတဲ့၊ ဝေဒနာတြေုကား အံခဲနေတဲ့ သံဃာတော်တြေ၊ူပည်သူတြေ၊ ကေဵာင်းသားလူငယ်တေနြဲႚအတူ ရပ်တည်လိုႚ၊ အံတင်းတင်ုးကိတ်လိုႚ၊ “သပိတ် … သပိတ်၊ မြောက်… မြောက်” လိုႚ အော်နေုကူပီ။ “အရေးတော်ပုံ အောင်ပၝစေ” လိ်ုႚ ဟစ်ကေ့းနေုကူပီ။
တကယ်ပၝ။ ကဵနော်တိုႚူမန်မာတေကြိုံင်ငံတကာမြာ မဵက်ြိာံမြဲတေဗြဵ။ သူတိုႚဘာသာူခားစကားကို သိပ်သိတာမဟုတ်ဘူး။ သူတိုႚ ထုံးတမ်းတြေ နားလည်တာမဟုတ်ဘူး။ ကဵနော်တိုႚူပည်ပရောက်ူမန်မာတြေ လညြ်းနေ လေအြောင်ူးမင်းဇောင်းမကဵန်၊ သံရုံးရြေႚ၊ူမြိႚတော်ခန်းမရြေႚ၊ ကုလရုံးတေရြေႚ ထက်ြလာူပီူးမန်မာူပည်ုကီးအတကြ် ဟစ်ကေ့ုးကတော့ – အမဵားဆုံး အားပၝးတရ အော်ဟစ်ုကတာူမန်မာလိုပၝခင်ဗဵာ။ အဂဿလိပ်လိုက Free! Free! Free Burma နဲႚ၊ Free! Free! Aung San Suu Kyi!! လောက်ပဲ ရည်ရည်လည်လည် အော်ိုံင်တာပၝ။
ူပီးတာနဲႚ ကဵနော်တိုႚူမန်မာတြေ လက်သီးတြေ ကဵစ်ကဵစ်ဆုပ်ူပီး လက်တြေ ဆန်ႚတန်းလိုႚ တခဲနက် ဟစ်ေုကြုးကတာက – “အာဏာရင်ြစနစ် ကဵဆုံးပၝစေ၊ အရေးတော်ပုံ အောင်ပၝစေ နဲႚ သပိတ် သပိတ် မြောက် မြောက်” ပဲူဖစ်ပၝတယ်။
ကဵနော်တိုႚဘေးမြာ ကဵနော်တိုႚရြေႚမြာ ကဵနော်တိုႚ ပတ်ပတ်လည်မြာ လူုမဵြိူးခားတြေ၊ ဘာသာူခားတြေ၊ လူအရောင်စုံ၊ လူအလြာစုံက တေူဖးေူဖး ၀န်းရံလိုႚ၊ လက်ထဲမြာ သြေူးဖိငြ်ူဖိင်ြကဵနေတဲူ့မန်မာသံဃာတြေ၊ လူတေရြဲႚ ဓာတ်ပုံတေကြို စြဲကိုင်၊ ဖယောင်းမီးတိုင်တြေ ထနြ်း၊ သံဃာတော်တေရြဲႚ သာသနာ့အလံကို လငြ့်ူပီး၊ ကဵနော်တိုႚူမန်မာတေနြဲႚအတူ ငိုကေ့ုးကတယ်၊ နာကဵည်ုးကတယ်၊ လတ်ြလပ်ရေးအတကြ် ဟစ်ကေ့ုးကတယ်။ သူတိုႚဘာသာ စကားတေနြဲႚေုကြးေုကာ်ုက၊ သူတိုႚဘာသာနဲႚ ဆုတောင်းစာတြေ ရတ်ြဆိုကနဲႚ။ ဒၝပေမယ့် သူတိုႚနဲႚ ကဵနော်တိုႚနဲႚ ဒီအခဵိန်မြာ တစ်ခုတည်းပဲ၊ တစ်သားတည်းပဲ။ တလောကလုံးရဲႚ အသံက ဒၝပဲ …
သပိတ် … သပိတ်၊ မြောက် … မြောက်။
၂၁ ရာစုသမိုင်းရဲႚ ရာဇ၀င်တင်ြတဲ့ ဟောဒီ သံဃာ့အရေးတော်ပုံကီးမြာ၊ ကဵနော်တိုႚူမန်မာတေအြူပင်၊ လတ်ြလပ်စြာ ဘာသာတရား ကိုးကယ်ြခငြ့် နဲႚ လတ်ြလပ်စြာ ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုခငြ့်ကို တန်ဖိုးထာုးကတဲိုံ့င်ငံတကာက လူတြေ၊ အဖြဲႚအစည်းတေကြူမန်မာူပည်က သံဃာတော်တြေ၊ လူထုတေဖြက်က ရပ်တည်ူပီး စစ်အာဏာရင်ြစနစ်ကို ရတ်ြခဵ အရေးယူဖိုႚ တခဲနက် ဆောင်ရက်ြနေုကခဵိန်မြာ – တခဵြိႚူမန်မာပညာတတ်တြေ၊ူမန်မာအရေးကဋ္ဋမ်းကဵင်တဲူ့မန်မာမဟုတ်တဲ့လူတခဵြိႚကတော့ – တပ်မတော် အင်အားရြိမြ တိုင်ူးပည် အင်အားရြိမည် တိုႚ၊ တပ်မတော်ူဖိခြဲသူ ဒိုႚရန်သူတိုႚ၊ တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သာ အဖ … စသည်တိုႚ ကို တခဵြိႚ စာသင်ကေဵာင်းတေထြဲ၊ တခဵြိႚသတင်းစာတေထြဲ၊ တခဵြိႚ ညီလာခံခန်းမတေထြဲမြာ အတင်းကာရောူဖဲကား အော်နေတော့တာပၝပဲ။
ဒၝေုကာင့် မောင်ရစ်လည်း တတ်သလောက်မတ်ြသလောက်နဲႚေုကြးေုက်ာသံ ထုတ်ပေးရတော့တာပေၝ့။ ထပ်ေူပာလိုက်ပၝအုံးမယ်။
” အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ရဲႚ အထက်မြာ တပ်မတော် ဆိုတာ မရြိဘူး “
ကမ္တာႚသမိုင်းပဲုကည့်ုကည့်၊ူမန်မာ့သမိုင်းပဲုကည့်ုကည့် လူသားတိုင်း အစြဲအလန်ုးကီုးကီးနဲႚ ခဵစ်ခင်ပြေႚဖက် သိမ်းပိုက်ုကည်ူဖြုကတာ – သူတိုႚတေရြဲႚ အမဵြိး၊ ဘာသာ နဲႚ သာသနာပဲူဖစ်ပၝတယ်။ အဲဒီရဲႚ အထက်မြာ ဘာမြ မရြိဘူး။ ဟစ်တလာတိုႚ၊ မိုဆိုလီနီတိုႚ မရြိဘူး။ နာဇီတိုႚ၊ ဖက်ဆစ်တိုႚ မရြိဘူး။ ရောမ အင်ပၝယာတိုႚ၊ နေမ၀င် အင်ပၝယာတိုႚ မရြိဘူး။ ကဲ … အဲဒီတော့ အိံစြ် ၄၀ လောက်ကလေး လက်နက်အားကိုးနဲႚ မင်းမဲ့စရိုက်လုပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ခဵပ်ြတေနြဲႚ သူတိုႚတပ်မတော်ဆိုတာက ဘာမြ ၀င်ူပီုးကီးကဵယ်ူပခဵင်စရာ မရြိဘူး၊ တောေူပာ တောင်ေူပာ ဟိုလိုဖစ်ခဵင်၊ ဒီလိုဖစ်ခဵင် ဘာမြူဖစ်ခဵင်စရာ မရြိဘူး။
ိုံင်ငံတော်ဆိုတာူပည်သူနဲႚဖြဲႚတာ၊ ယဉ်ကေဵးမြ၊ ဘာသာစကား၊ သက်ဝင်ယုံကည်မတြေနြဲႚ ဖြဲႚစည်းတာပၝ။ အဲဒၝကို စောင့်ရြောက်ကာကယ်ြဖိုႚ စစ်တပ်တိုႚ၊ ရဲတိုႚဆိုတာ နောက်မြ လိုက်လာတာပၝ။ လက်နက်ိုံင်ငံတော်ုကီးတိုႚ ဘာတိုႚညာတိုႚက ကေဵာက်ခေတ် နဲႚေုကာက်ခေတ်မြာ သြားေူပာပၝလေ။ ခုခဵိန်မြာ စစ်အာဏာရင်ြတြေူပတ်ြကဵလိုႚ ပဵက်သြားတဲ့ တိုင်ူးပည်မရြိပၝဘူး။ အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဖဵက်လိုႚ၊ ပဵက်စီးအောင်ုကံစည်လိုႚသာလဵင် အာဏာရင်ြတြေ၊ ၀ၝဒတြေ၊ အင်ပၝယာတြေ ပဵက်စီးသြားတာပဲ ရြိပၝတယ်။
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တေကြို ရောမအင်ပၝယာုကီးက သတ်၊ ကပ်ြမဵက်၊ ဖမ်းဆီးနဲႚ။ တမန်တော် ယေရကြို ရောမစစ်သားမဵားကြိံပ်စက်နင်းခေဵုကတာတြေေုကာင့် ရောမအင်ပၝယာုကီး သမိုင်းရာဇ၀င်မြာ တိမ်ူမပြ် ပေဵာက်ကယ်ြသြားစေသလားပၝပဲ။ အခုအခဵိန်ထိ ရြိနေတာက ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တေပြၝ။
ထိုႚအတူ နာဇီတေအြောက်က ရုန်းထလာတဲ့ ဂဵြးလူမဵြိးတြေ၊ ကိုလိုနီစနစ်က ကုလားဖန်ထိုးလိုႚ တိုင်ူးပည်ပေဵာက်ခဲ့ရတဲ့ ပၝလင်္စတိုင်း လူမဵြိးတြေ၊ သူတိုႚတေရြဲႚ အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအထက်မြာ တူခားဘာမြ မရြိတာ အထင်အရြားပၝပဲ။
ိံစ်ြပေၝင်း ၂၅၀၀ ကေဵာ် တည်ူမဲခဲ့တဲ့ ဂေၝတမဗုဒ္ဌ ရဲႚ ဘာသာတရားအဆုံးအမကို ထမ်းရက်ြနေတဲ့ တပည့် သံဃာတော်တြေ၊ သူတိုႚရဲႚ နောက်လိုက် ဒၝယကာ၊ ဒၝယိကာမတေကြို နင်းခေဵ ဖဵက်ဆီး သတ်ူဖတ်ူပီး၊ စစ်အာဏာရငြ် တန်ခိုးအာဏာ သက်ဆိုးရည်ြရေးအတကြ် စတေးပစ်၊ ယစ်ပူဇော်ပစ်ရဲတဲ့ တပ်မတော်က စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြတေအြတကြ် ဘယ်လိုလူတြေ၊ ဘယ်လို ဦးြေိာံက်နဲႚိံလြုံးသားနဲႚ လူသားစင်စစ်တေကြ ဘယ်လိုမဵြိး ရြေႚနေလိုက်ပေး၊ ကာကယ်ြပေးရဲ ပၝလိမ့်မလဲလိုႚ မောင်ရစ်တိုႚက ထိုင်ုကည့်ရင်း စာရင်းကောက်နေရတာပေၝ့လေ။
အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စစ်ဖိနပ်နဲႚနင်း၊ နံပၝတ်တုတ်နဲႚရိုက်၊ သေနတ်နဲႚပစ်ရုံတင် အားမရသေးလိုႚ၊ လူလည်ခေၝင်မြိာိုံင်ငံတကာအလည်မြာ လညြ့်လည်ူပီး၊ သြေးရူးသြေးတန်းနဲႚ လိမ်လည်မုသားတြေေူပာ၊ လုပ်ဇာတ်တြေ ခင်း၊ သံဃာတေကြို ပိုပီး သင်းကြဲအောင်၊ ဂိုဏ်းကြဲအောင် လုပ်၊ အူပစ်မဲ့တဲူ့မန်မာူပည်သူတေကြို ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ် မူပန်ရဲအောင် ခဵိန်းေူခာက်၊ မဟုတ်သတင်းတေထြုတ်လငြ့်နေတဲ့ အခုလို အခဵိန်မြာ စစ်အာဏာပိုင်တြေ၊ စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြတြေ ပေးတဲ့ကမ်းတဲ့ သံဃာသြေးတေစြနြ်းနေတဲ့ ဆူဆူဖြိူးဖြိး အရိုးအရင်းခဲနေရတဲ့ စစ်အလိုတော်ရိတြေ၊ စစ်သြေးရင်းစစ်သားရင်းတြေ ကိုတော့ မောင်ရစ်က ဘာမြ မေူပာလိုပၝ။ ငရဲလမ်းကို နတ်လမ်းထင်နေမင့်ဟာကိုး။
သိုႚသော်လည်း ထိုမတြပၝ့း ကင်းကဵန်ရစ်သူမန်မာအမဵြိးသား၊ အမဵြိးသမီးတိုႚကို တိုက်တနြ်းလိုသည်က -အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကယ်ြဖိုႚ၊ စောင့်ရြောက်ဖိုႚ ကဵနော်တိုႚူမန်မာ အမဵြိးသားကောင်း၊ သူတော်ကောင်း အားလုံးတိုႚရဲႚ တာဝန်နဲႚ အသိူပသဖိုႚ အခဵိန်အခၝကတော့ ဒီအခဵိန် ဒီအခၝ ဒီနေရာပဲူဖစ်ပၝတော့တယ်။ေုကာက်လိုႚ၊ ရြံႚလိုႚ၊ တေဝြေလိုႚ၊ အားနာလိုႚ၊ ဘာလိုႚႛ၊ ညာလိုႚ စသည်ူဖင့် အခုလို သာသနာူပပြဲတော်ုကီးကို ၀င်မြိဲုံကရင်ူဖင့် ရြေႚမြာ သြားစရာလမ်းက စစ်ဗိုလ်ခဵပြ်ုကီးမဵားနဲႚအတူ သြားမဲ့ အပယ်စခန်း ငရဲလမ်းပၝပဲလိုႚ၊ နိဗ္တာန်အကဵြိးမ္တွော် ၍ိုံးဆော်လိုက်ရပၝတယ်။
ရဲဘော်မသေ၊ သေသော် ငရဲမလား ဆိုတာ အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကာကယ်ြရင်းဆိုရင်တော့ ဟုတ်ခဵင် ဟုတ်မပေၝ့လေ။ ခုခဵိန်မြာတော့ ရဲဘော်မသေ၊ သေသော် ငရဲလားမြာကတော့ ခုခဵိန်မြာ အလင်းမ၀င်ရင် အလန်ြသေခဵာနေတာပၝပဲ။ စစ်အာဏာပိုင်တေရြဲႚ အရိုးအရင်းလေးနဲႚ မ၀ရေစာ စားနေရရြာတဲ့ ၀န်ထမ်းတေကြလည်း ဒီတခဵီမြာ သံဃာသြေးတေစြနြ်းနေတဲ့ ၀န်ထမ်းလစာတေကြို မမက်ပဲ၊ နောင်တက်လာမယ့်ူပည်သူႚအစိုးရကပေးမယ့်ူဖစြင်သန်ႚရငြ်းတဲ့ ၀န်ထမ်းလစာကို မ္တွော်မနြ်းလိုက်ုကမယ်ဆိုရင်ူဖင့်၊ အတိုင်းထက်အလနြ် တံခန်ြနဲႚ ကုက္ကာူးဖစ်တော့မယ်လိုႚ ထင်တာပၝပဲ ခင်ဗဵာ။
သံဃာအရေးတော်ပုံကီးမြာ တပ်မတော်က အရင်အတိုင်း၊ လုပ်နေုက နည်းလမ်းမဵားအတိုင်း ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး၊ြိံပ်စက်ထောင်ခဵ တာတိုႚ၊ အရပ်တကာလည်ူပီး လိမ်လည်လညြ့်ဖဵား၊ူခိမ်းခေဵာက်ကာဆီးတာတိုႚ လုပ်နေတာပၝ။ ဒီအူပင် နည်းလမ်းက အကုန်ပၝပဲ။ ဇာတိရုပ် ဘြားဘြာုးကီး ပေၞခဲူ့ပီကိုး။ သိုႚသော်၊ူပည်သူလူထုဖက်ကတော့ အစစ အရာရာ အဖက်ဖက်က သာလန်ြကောင်းမန်ြတဲ့ ရေခံ၊ေူမခံ၊ နည်းလမ်း အမေအြိံစြ်၊ သင်ခန်းစာတြေ အူပည့်ိံငြ့် အဆင်သင့်ရြိနေပၝတယ်။
ူပည်တငြ်ူးပည်ပက တခဲနက်သော သပိတ်မြောက် သံဃာတော်မဵား၊ သံဃာတော်မဵားကိုယ်တိုင် ခဵီူးမငြ့်ထားတဲိုံ့င်ငံခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်၊ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားလူငယ်မဵား၊ အင်န်အယ်လ်ဒီ လူငယ်မဵား (လူုကီးတေတြော့ နည်းနည်း ပၝတယ်၊ လူငယ်တေကြ အမဵာုးကီးပဲ)၊ သပိတ်မြောက်သံဃာတော်မဵားကို ထောက်ခံတဲ့ စာပေအိုံပညာရင်ြမဵား၊ မိသားစုမဵား၊ သံဃာသပိတ်ုကီးကို နည်းမဵြိးစုံဖင့် ကူညီသတင်ူးဖန်ႚပေးနေသည့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ နည်းပညာရင်ြမဵား၊ စာနယ်ဇင်းသမားမဵား၊ လူငယ်မဵြိးဆက်မဵား၊ သံဃာမဵား၊ ဒၝယကာ၊ ဒၝယိကာမဵားကို အသက်စနြ်ႚအကာအကယြ် ပေးရတော့မည်ဟု ခၝးသီးသော အတြေႚအုကံမြဵား လောလောလတ်လတ် ရင်စည်းခံထားရသော အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကူမန်မာလူထုကီး၊ အတြေႚအုကံရြိူပီူးဖစ်သည့်ိုံင်ငံရေးအကဵဉ်းသား မိသားစုဆေမြဵြိးသားခဵင်းမိတ်ဆေမြဵား (တူပည်လုံးပၝပဲလေ၊ ထောင်ထဲမရောက်ဖူးတဲ့ မိသားစုဆိုတာူမန်မာူပည်မြာ မရြိပၝ)ိံငြ့် အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို တယောက်တလက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ထောက်ပုံ့ကမယ့်ူပည်ပကူမန်မာမိသားစုမဵား၊ စသည်ူဖင့်တိုႚနဲႚ ယဉ်ြထိုးပီုးကည့်ိုံင်ပၝတယ်။
ထိုႚအူပင် အရင် အရေးအခင်းမဵာိးံငြ့်မတူ၊ ထူးခားခဵက်ုကီးကတောူ့ငိမ်းခဵမ်းမြ၊ တရားမ္တွတမြိံငြ့် အမန်ြတရားအတကြ် ရပ်တည်ရဲတဲူ့ပည်သူလူထုကီးရဲႚ တည်ူငိမ်တင်းမာတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲႚ၊ စည်းကမ်း သေ၀ပ်မပြၝ။ ဘယ်လိုပင်ဝင်ူပီး သပ်လ္တြွိ သပ်လ္တြွိ၊ ခဵိန်းေူခာက် သြေးခြဲ သြေးခြဲ၊ အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတကြ် အူမင်ရငြ်းနေတဲူ့မန်မာူပည်သူတြေူဖစ်ပၝတယ်။
ိုံင်ငံတကာကလည်ူးမန်မာ့အရေးကို အထူးစိတ်ဝင်တစား ကူညီဖိုႚ လုပ်နေုကပၝတယ်။ုကည့်ပၝ အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ တရုပ်၊ အာဆီရန်၊ုသစေုတးလဵ၊ ဂဵပန် စသည်ိုံင်ငံတေကြ အတင်းကို သာသနာဝင်ူပခြဵင်နေတော့တာပဲ။ ဒီနေရာမြာ လူႛသဘာဝအရိုံင်တဲ့ဖက်က ပၝခဵင်တာကိုလည်း နားလည်ပေးရမြာပေၝ့လေ။ သိုႚသော် မည်သူမဆို ကူညီသည်ူဖစ်စေ၊ မကူညီသည်ူဖစ်စေ၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလိုႚ၊ူပည့်အင်အားသည်ူပည်တငြ်းမြာပဲ ရြိတာမိုႚ မောင်ရစ်တိုႚလိုမန်မာအမဵြိးသားကောင်းတေကြတော့ – ဒိုႚတိုင်ူးပည် ဒိုႚအရေးကိုမန်မာလိုပဲ အတူတကြ အားပၝးတရ ကေ့းေုက်ာလိုက် ခဵင်တာပၝပဲ။
သပိတ် …သပိတ်၊ မြောက် … မြောက်။
အမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အထက်မြာ တပ်မတော် ဆိုတာ မရြိ။